'No change' Schumacher အခြေအနေ - သတင်း Rule
'' အဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှု’ Schumacher အခြေအနေ
မိုက်ကယ် Schumacher တစ်ဦး၌တည် “နိုး-up ကအဆင့်” ထိုမေ့မြောရာမှသူနီးပါးတဆယ်ပတ်ကြာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ဦးအသက်အန္တရာယ်နှင်းလျှောစီးမတော်တဆထိခိုက်မှုအောက်ပါထဲတွင်နေရာခဲ့သည်, သူ့အပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်သောကြာနေ့.
Sabine Kehm မှကြေညာချက်ဖေဖေါ်ဝါရီလကတည်းကပထမဦးဆုံးခဲ့ 13, အခါ, ဖော်မြူလာတစ်ခုမှာ ဒဏ္ဍာရီရဲ့မိသားစုသူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သူ recover မယ်လို့ယုံကြည်ဖို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်.
Kehm ကပြောပါတယ်: “မိုက်ကယ်အပြီးတွင်ဖွင့်အဆင့်ရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်.
Schumacher ရဲ့အခြေအနေကကမ္ဘာတဝှမ်းကမီဒီယာအားဖြင့်အများကြီးထင်ကြေး၏ဘာသာရပ်ခဲ့ပေမယ့်အနည်းငယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Grenoble ၏ပြင်သစ် Alpine ကိုမြို့အတွက်တက္ကသိုလ်ဆေးခန်း၌ပြီးနောက်ရှာဖွေနေဆေးပညာအဖွဲ့ကဖြန့်ချိခဲ့ကြ.
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်, သူ့မိတ်ဆွေဟောင်းအသင်းဖော် Felipe Massa Schumacher မကြာသေးမီကခရီးစဉ်အတွင်းသူ့ကိုတုံ့ပြန်ပုံသည်ဟုဆိုအဖြစ်ကိုးကားခဲ့သည်.
“သူသည်အိပ်ပျော်နေသည်, သူကပုံမှန်ကြည့်နှင့်သူသည်မိမိနှုတ်ဖြင့်အနည်းငယ်တုံ့ပြန်မှုပြသ,” Massa သို့ပြောသည် ဂျာမန် သတင်းစာပုံရိပ်ကို.
“သူ့ကိုငါနှင့်အတူအချို့သောအချိန်ဖြုန်းနိုင်မှအရမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့,” Massa ကပြောပါတယ်. “သူ့ကိုငါနှင့်အတူတစ်တွေအများကြီးပွောဆို, အဖွဲ့လုပ်နေခဲ့ပုံနှင့် ပတ်သက်., သစ်ကားအကြောင်း။”
“သူ့ကိုငါအကောငျးဆုံးစွမ်းအင်ကိုပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့,” ဟုသူကပြောသည်. “သူကတစ်ဦးအလွန်ခိုင်ခံ့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးကိုယ့်ကိုတကယ်တဖန်ဘဝခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။”
Schumacher တစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်အပြီးတစ်ဦးသွေးဆောင်မေ့မြောထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ် 29 သူ့သားနှင့်အတူ Meribel ၏အပန်းဖြေစခန်းနှင့်မိတ်ဆွေများအုပ်စုတစ်စုမှာနှင်းလျှောစီးပြီးစဉ်သူတစ်ဦးကျောက်ပေါ်မှာသူ၏ဦးခေါင်းကိုထိမှန်သည့်မတော်တဆထိခိုက်မှု.
ထိုမေ့မြောနေရာချမခံရမီ, သူသွေးထွက်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအထိလျှော့ချရန်ခွဲစိတ်ခဲ့. သူ့မိသားစုကိုဇန္နဝါရီလရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာ 30 တစ်ဦးမေ့မြောသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသတိမှသူ့ကိုပြန်ပို့ခြင်းအမှုတွင်တစ်ဦးအမြင်နှင့်အတူလျှော့ချခံရခဲ့.
21390	0 ရုပ်ပုံ, ဖိလစ်ပီ Massa, ဖော်မြူလာတစ်ခုမှာ, သောကြာနေ့, ဂျာမန်ဘာသာစကား, မိုက်ကယ်, မိုက်ကယ် Schumacher, Schumacher
← iOS အတွက် Gmail ကိုအဓိက update ကိုရရှိသွားတဲ့ပေမယ်အသုံးပြုသူများကိုမပျော်ရွှင်နေကြသည် မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ကိုထမ်းနှင့်အဆက်အသွယ်ရှုံး 239 လူထု →